Ikhaya leHolide labakhenkethi i-A4 (Iyunithi YAKHE) - I-Airbnb
Ikhaya leHolide labakhenkethi i-A4 (Iyunithi YAKHE)
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguOp
Ubutofotofo kunye neyokugqibela yale mihla, Ipropathi yam ikufuphi kakhulu kuzo zonke iindawo eziphambili zeDharamsala. Indawo iqhagamshelene kakuhle ngezothutho zikawonke-wonke kwaye ikude kakhulu nesikhululo seebhasi iSheela Chowk. Ipropathi isandula ukwakhiwa kwaye inazo zonke izixhobo zokukunika ukuziva ubunewunewu. Onke amagumbi axhotyiswe ngemathiriyeli ekumgangatho ophezulu elingana neehotele zodidi oluphezulu. Uya kufumana ikhitshi esebenza ngokupheleleyo enemodyuli ene-hob kunye netshimini apho unokuzama khona izakhono zakho zokupheka.
Kwimeko apho unqwenela ukuphumla kwaye ungabi semoyeni wokupheka, singakunika ukutya okuphekwe ekhaya ngeendleko ezongezelelweyo. Sikwaneqhina kunye nevenkile yokutyela ekufutshane edumileyo eza kuzisa ukutya okumnandi kwigumbi lakho ngexabiso elifanelekileyo. I-Apartment inamagumbi okulala angama-Master abanzi kunye nebhedi yobukhulu boKumkani kunye negumbi lokuzoba elibanzi. Amagumbi anesilingi yobuxoki enesithuba somoya esigcina iqondo lobushushu legumbi. Awuyi kufuna i-Air Conditioner kumagumbi ngexesha lasehlotyeni kodwa uya kufumana ukufudumeza ngexesha lasebusika. Ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela linokufikelela kwi-24/7 kumanzi ashushu nabandayo. Ikhitshi ifakelwe isihluzo samanzi se-RO. Iindwendwe ziya kuba nokufikelela kwiikhitshi ezimbini kunye namagumbi okuhlala amabini kunye namagumbi okulala amane kunye negumbi lokuhlambela ezintathu, Ipropathi ine-revulet ekufutshane kunye nesandi samanzi aqukuqelayo kuyo siya kuyithuthuzela imiphefumlo kwaye ikunike uxolo lwengqondo. Imbonakalo entle yoluhlu lweDhauladuar ngokuqinisekileyo iya kukushiya ubambekile. Uya kufumana umbono ongahambelaniyo weentaba ukusuka kwipropathi.
Irivulet kunye nesitiya seti zikude kakhulu. Itempile yaseChamunda kunye netempile yaseBrajeshwari nazo zikufuphi. Ibala leqakamba kunye neMakethi ePhambili ziku-2-3km kude. Zonke iiMonestaries ezinkulu zaseTibet zikufuphi.
Umbuki zindwendwe ngu- Op
Kuba iyindawo yokuhlala kwaye ndihlala nosapho lwam kumgangatho oPhakathi, iindwendwe zamkelekile ukuba zinxibelelane malunga nokubonwa kwendawo kunye neminye imibuzo.